Ngwaahịa a bụ hydollergenic. Akpụkpọ ya anaghị ekwe ka mmiri nke bụ gburugburu ecosystem zuru oke maka nje bacteria na ụmụ nje iji zụlite iji wulite.
1. Ogologo oge ị ga-enwe ike?
2.Mgbe usoro ịkwụ ụgwọ ị na-anabata?
3.Ọ nwere ike ịnweta ụfọdụ ihe nlere?
Mgbe ị gosiputara onyinye anyị ma zigara anyị ọnụ ahịa nlele ahụ, polyester clogy, anyị ga-emecha ihe nlele n'ime 15 ~ 20 ụbọchị. Nwere ike ịjụ ụlọ ọrụ Express ka ọ bulie ihe nlele ahụ na ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ ịnwere ike izitere anyị DHL, FedEx ma ọ bụ Ups na-anakọta gị na akaụntụ gị.
1.customers chọrọ ịmatakwu banyere ngwaahịa ọhụrụ anyị Ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị, kpọtụrụ anyị.
2. Websiness na-agbaso usoro njikwa usoro iji hụ na ngwaahịa anyị zutere ma ọ bụ gafere ndị ahịa anyị. Na mgbakwunye, anyị na-enye ọrụ ahịa maka ndị ahịa niile n'ụwa niile.
3.Since guzobere, Rayson bu n'obi inye ndị ahịa anyị ihe dị egwu ma nwee egwu. Anyị ehiwela nke anyị r&D Center maka imewe ngwaahịa na mmepe ngwaahịa.
4.WO nkwa na a na-eziga ndị ahịa nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere anyị, kpọọ anyị ozugbo.
Rounlolo ụwa Clough Co. Ihe dị ka nkeji iri anọ site na ụgbọ ala site na Guangzhou Baiyun International Airport ọdụ ụgbọ elu na Cannon Fair Fair. Onye isi ụlọ ọrụ anyị "Jingxin" malitere ime ka oge opupu ihe ubi na-emepụta ihe na 1989, ma ọ bụghị naanị nke matraasi / ọnwa 60,000 / ọnwa) na akwa pp na-enweghị mmasị na akwa (ọnwa 1800) ndị na-emepụta ihe karịrị ndị ọrụ 700. A na-ebuga ihe karịrị 90% nke ngwaahịa anyị na Europe, polyester Starno, ndị America, Australia na akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Anyị na-eweta matralitents na-enye certa, Oké Osimiri, Kingdom, Shrickland na ụdị ndị ọzọ matragel na-ewu ewu. Rayson nwere ike iweta matratic mmiri, bonnell mmiri, na-aga n'ihu na-aga n'ihu, nchekwa ahịhịa, akwa akwa na latex match.